Izinto eziluncedo nezingeloncedo ejolise model weziganeko pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo nezingeloncedo ejolise model weziganeko pa parlour
Kwitheyibhile isehlakalo, kuyinyaniso ukuba nkqu nesendlu pa ekucingelwa ukuba sinokunikezela kunesiqhelo. Noko ke, oko kuthetha ukuba yonke iqonga hlengahlengiso ayikho kakade. In, ngexesha lomsitho, siza kujonga ezilungileyo nezingalunganga ukuba ukubetha imodeli msitho. Ethetha ezingalunganga womzekelo isiganeko
, imodeli isiganeko xa isiganeko kunjalo bomashini ekuphulukenwe nalo.
kubhaliwe, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, bubonakala rhoqo xa unayo umfuziselo ayinayo imigama isebenza xa kuthe imodeli. Ngokuba imodeli akukho ukusebenza ngexesha eziqhelekileyo, siye sibe ityala kumatshini ekuphulukenwe nalo ukuba ndisiya kwi nokubaleka-up komsitho. Ukongeza, kwimeko leyo iliza embi kuba akukho lonke ixesha eliqhelekileyo, kukho kungenzeka ukuba utyalo inyuswe. Xa sijonga le
for uhlengahlengiso umzekelo iinzipho, kusenokuba lula ukuyiqonda kakuhle.
kucinywa imodeli isiganeko kakhulu kwaye Andaman, uhlengahlengiso isikhonkwane ngexesha imifanekiso siganeko ezijongwa umatshini recovery epheleleyo, okanye ukucula kuphela kwiziganeko zikarhulumente eziqhelekileyo ngaphandle ukuphazamisana nantoni na, kusenokwenzeka ukuba ukuma edityaniswe kuqala kuphela, yaye okanye ukuvula kancinane kuphela, isikhonkwane itshintshile ziya kuba malunga omnye okanye emibini.
ngexesha siganeko, ngokuba kwingcamango esisigxina ukuba bobakhupha phandle kukho ngokupheleleyo, uya badla ileqe ngakumbi kunesiqhelo. Ecaleni pa lokuphumula, kodwa injongo.
ukuba lezikhonkwane zibe lexinene, imodeli weziganeko luyakhuselwa, kucetyiswa ukuba yantlitha umfuziselo ngokuqiniseka, ezifana njengemizekelo iibhodi. ntoni ukuze abanakwanela usuku besenza imifuziselo Kwimeko enjalo demerit, nceda ukuchonga ukukhangela kakuhle uhlengahlengiso nail njengesiqhelo.
Ngoko ke, ethetha merit elandelayo, kunjalo le imo imodeli weziganeko ngexesha lomsitho evulekileyo ngokupheleleyo sicinywa ngokunyaniseka. Ukususela iziganeko, ndiza kuzama ukuba bakhonze, nesendlu pa. Ngokukodwa, okanye oomatshini abatsha xa kuthe imodeli, ukuba unemouse elinamalungelo afanayo nalawo Xintai imifuziselo kunye nemiqondiso model imifuziselo isehlakalo, ungenza kunokuthiwa ukuba sijolise imodeli yokuqala.
_x00 It 0D_ athi kutheni imifuziselo ezinjalo Kuthekani ukuba injongo imodeli isiganeko kuqala, uya kuba isebenza ngexesha eliqhelekileyo kakhulu inxaxheba.
Ngexesha lomsitho, koko msebenzi yinto nam kwakhona, kangangokuba isebenza isnt umfuziselo. Ntoni wena usithi, Xintai ne miqulu eselugcinwe yokuzibophelela-Xintai, nayo imifuziselo ezithandwayo ezifana imodeli ibhilibhodi, wathi ukubaleka nangona ukushiya yandisa ku ngakumbi kunesiqhelo. Isibakala sokuba enjengale asinabuganga iziganeko kukhombisa imodeli kukuba yinto isiganeko apho ufuna ukwenza intlawulo yesibheno kakhulu.
kwakhona ukuvavanya indlela esinzulu lonke pa nakwesiphi na isiganeko, oko ngumboniso ukuyisebenzisa kakuhle. Ngelo xesha iziganeko ezinkulu kangaka, kusenokwenzeka ukuba ukuvula uphela uhlengahlengiso isikhonkwane. Ngokwahlukileyo imodeli isiganeko nokubi, kunye neeyunithi nje ezimbalwa lolungelelwaniso isikhonkwane eziqhelekileyo, abanye sidla zivuleleke ngokupheleleyo. itheyibhile
ukuba akhethe kukuthi, khangela i data kunokuba ujonge lezikhonkwane, ithi loo mntu ukuhlola nokulatyuza iqonga inokuba kuqala. Ngale ndlela, i efanayo xa kuthe imodeli, ungakhetha i engxakini enye izixhobo ezininzi wobuyiselo okanye kuncedke ukukhululwa umatshini iqashiso ukuchonga kakuhle ngokuphumelela Ipesenti iyahluka kakhulu. D_ itheyibhile lokukhetha, khangela i data kunokuba ujonge lezikhonkwane, ithi loo mntu ukuhlola nokulatyuza iqonga inokuba kuqala. Ngale ndlela, i efanayo xa kuthe imodeli, ungakhetha i engxakini enye izixhobo ezininzi wobuyiselo okanye kuncedke ukukhululwa umatshini iqashiso ukuchonga kakuhle ngokuphumelela Ipesenti iyahluka kakhulu. D_ itheyibhile lokukhetha, khangela i data kunokuba ujonge lezikhonkwane, ithi loo mntu ukuhlola nokulatyuza iqonga inokuba kuqala. Ngale ndlela, i efanayo xa kuthe imodeli, ungakhetha i engxakini enye izixhobo ezininzi wobuyiselo okanye kuncedke ukukhululwa umatshini iqashiso ukuchonga kakuhle ngokuphumelela Ipesenti iyahluka kakhulu.